with others – Zulu Translation – Keybot Dictionary
"ukwabelana nabantu ngokushesha nakalula"
Iningi lezinhlelo zethu livumela ukuthi wabelane ngemininingwane nabanye. Khumbula ukuthi uma wabelana ngemininingwane emphakathini, ingabonakala ezinjinini zokucinga, kubandakanya u-Google. Izinsiza zethu zikunikeza izinto ezahlukene ongazikhetha ekwabeni nasekususeni okuqukethwe kwakho.
Ngobukhona bamandla eNingizimu Afrika, i-UNICEF ingummeli ohamba phambili wezingane. Sinegunya emhlabeni wonke lokuthonya abathathi zinqumo neningi lozakwethu emazingeni aphansi ngokushintshela imibono ekhangayo ekubeni ibonakale. Sikholelwa ukuthi ukondla nokunakekela izingane kuyizinsika zokuqhubeka kwabantu. I-UNICEF yadalwa ngale njongo engqondweni – ukusebenza nabanye ukuze kudlulwe kuzithikamezi ezibekwa endleni yengane yindlala, ubudlova, isifo, nokucwasa.